DIGAAGGA SEABRIGHT: SHARAXAAD KA MID AH TARANKA IYO SAWIRKIISA, NOOCYO - DAHAB IYO LACAG, ISBARBARDHIGYO IYO MUUQAALADA SII KORDHAYA - BEERAHA DIGAAGA
Ragga raaxada leh ee raaxada leh xanaaqa dareenka - digaagga ee Sibright
Digaagga beeraha ee Seabright waa mid aad u caan ah oo beeraleyda digaaga ah oo caan ku ahaa oo ku dhacay jacayl iyaga oo ah mugdigoodii asalka ahaa, miisaan yar, dabeecad dagaal iyo dabeecad xumo. Waxay ku kala duwan yihiin xarrago, aan qabyo-qabeen iyo suurtogalnimada, way fududahay in la joogteeyo oo si sahlan loo hirgeliyo.
Shimbiraha jilicsan ee caleemaha waa cuf. Waxay ahaayeen kuwo Ingiriis ah horraantii qarnigii 18aad, waxayna magacooda u mahadnaqeen taranka - Sir John Seabright.
Digaagga dillaacsan ee caanahan ayaa caan ka ahaa fasalka aristocratic ee ingiriisiga, tan iyo Lord Seabright oo ahaa nin leh sharaf iyo sharaf leh.
Ilaa 1800, John wuxuu bilaabay inuu abuuro nooc cusub oo digaag ah. Dhawr sano kadib, wuxuu ugu dambeyntii helay digaagga calaamadaha nacaybka iyo guryaha la doonayo.
Markaad ka soo gudubto duufaan Bentamka iyo ukumaha Polishka leh xayawaan fara badan iyo "ku darsaday" ilmo isku dhafan oo isku darka ah ee digaagga Hamburg, oo sidoo kale leh xayawaan la jeexjeexay, Sayidku wuxuu helay jinsiga la rabay.
Bartamihii qarnigii 19aad ee Ingriiska, kooxda beerta caanaha ee Seabright, oo la yiraahdo Sebrightclub, ayaa la aasaasay, kuwaas oo xubinnimadu ka kooban yihiin dad sharaf leh.
Qiimaha digaagga Seabright qarnigii 19-aad wuxuu u dhexeeyay 15 ilaa 30 rodolkiiba labadii qof. Haddii aan xisaabta ku darno xaqiiqda ah in dakhliga todobaadlaha ah ee muwaadiniinta si wanaagsan u-guursadey aanay ka badnayn dhowr rodol, markaa waxaad qiyaasi kartaa qiimaha sare ee taranka wakhtigaas.
Shimbiraha Dwarf, oo leh cufan, isku dheelitiran, isku dhafan, dhexdhexaad ah, xabadka si adag loo dhajiyo, taayirsan oo si fiican u wareegsan, jidhka oo dharbaaxa, daboolka quruxda badan leh.
Mid kastaaba wuxuu leeyahay jajab madow. Munaasabada waxaa ku jira qaab muuqda oo cad.
Calaamadaha Caleenta Seabright:
madax yar oo wareegsan, shanlaha casaan leh "luul"
guluubku wuu yar yahay, wuxuuna leeyahay mugdi madow ama casaan
wajiga waa casaan, indhaha waa bunni madow
dhegaha ee cabbirka dhexdhexaad ah, midabkiisu midabkiisu midabkiisu waa mid midab leh, laakiin waxa la siiyaa fursad casaan ah
dhirbaaxo jilicsan, oo jilicsan, oo qaabaysan
Dhabarku waa gaaban yahay, ama guri dabaq ah, ama wax yar oo isku dhafan, si siman u rogaya dabool
qoortu waa gaaban tahay, dibna ujirta oo u fidisa jirka
Jidhku waa mid ballaaran oo hanti leh, laakiin qani ah
lugaha si cad ayaa loo kala saaraa oo daboolaa baalasheeda
paws ee hooska buluug-buluug, si ballaaran loo dhigo, siman.
Digaagga caleenta Seabright waa Kuroper, i.e. Labada jinsigoodba waxay leeyihiin xaraar isku mid ah. Taraawayaal ballaaran, oo leh wareegsan. Duufaantu ma laha boogaha dheer ee dhajinta ee mulkiinka iyo mindhicirka, xuubka dabada.
Dhibaatooyinka aan sharci ahayn:
Qalab adag iyo dherer badan oo qiyaasta weyn
Baalasha sare ama u dhow jirka
Burooyinka ku jira dabada, baalalka fiiqan ee foosha iyo dhabarka hoose ee lafdhabarta
Baalasha labajibaaran ama baqdin la'aan
Dhaqdhaqaaqa cawliga ee baaluqyada, dharbaaxo badan oo dhibco madow ah
Semilunar berriga xayawaanka ah halkii joogto ah ee joogtada ah
Midabada shimbiraha waa silvery (midabka ugu weyn waa lacag-caddaan ah oo leh madow oo dhalaalaya oo baaluq ah) iyo dahab (midabka ugu weyn (waa midabka dahabka ah).
Sawirka kowaad, Silver Sibright oo u muuqda kamaradda ayaa u muuqda dhinaca hore ee muuqaalkaaga:
Qaar ka mid ah digaagga quruxda badan ee madow:
Saddex sawir ee soo socda waxaad arki kartaa dhoobada dahabka ah:
Dumarka qafis, diyaar u ah bandhigga:
Iyo sawirkii ugu danbeeyay hal shakhsi oo ka mid ah noocyadaas, oo ku socda berrinka:
Koofiyadu waxay hoos udhigmeen dhulka, dabacsanaan ku xirnaanta jirka waa mid ka mid ah muuqaalada aasaasiga ah ee muuqaalkan.
Digaagga uma baahna daryeel gaar ah, si fudud ayaa loo dayactiraa, sidaa daraadeed waxay si gaar ah u jecel yihiin beeralayda digaaga.
Markaad dooratid qafis waa inaad fiirisaa xaqiiqda ah in shimbiraha ilmagaleenkani si fiican u duuli karaan.
Boobbiyeyaasha Seabright pugnacious, digaagga waxaa lagu gartaa jahwareer yar.
Hilibka digaaga ee daaqadan ayaa leh dhadhan fiican oo u eg sida hilibka hilibka ah.
Digaagga sirdoonka waxay ku adag tahay inay koraan, sababtoo ah waxay u baahan yihiin daryeel taxadar leh.
Si kor loogu qaado chicks hatching, waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo ukunta ka yar hen ah inta lagu jiro waqtiga ugu kulul ee sanadka. Nafaqada bantamok ee dahabka ah aad bay uga adag tahay dahabka.
Wareegga ukunta waxaa lagu samayn karaa dabiici ahaan iyo kobcin. Dhalinyaradu waxay u muuqdaan hal maalin horeba ugxan ugxan farabadan.
Digaagga waxaa la quudin karaa ukun la shiilay oo la kariyey feed isku dhafan. Kadib waxaad geli kartaa boorashka caanaha ee caanaha, gooryaanka la jarjaray iyo cagaarka. Marka hore, mudada u dhaxaysa quudinta digaagga waa inay ahaataa qiyaastii 2 saacadood, ka dibna qaadashada cuntada waa in la dhimo ilaa 5 jeer maalintii.
Digaagga ee caan this waa aan qabin in ay ku quudiyaan, sidaas darteed waxaa la siin karaa cunto isku mid ah sida digaagga ee naasaha waaweyn. Sidoo kale cuntooyinkooda waxaad ku dari kartaa caanaha, soodhada, jiis, caleenta, geedka qamadiga ah, baradhada, dubista khamiirka, karootada cusub iyo qashinka cuntada. Shimbiraha qaangaarka ah waa inay noqdaan 3 jeer maalintii.
Shimbiraha waa thermophilic waxaana dhici karta inay kufilmaamayaan inta lagu jiro isbedelka cimilada. Sidaa darteed, xilliga qaboobaha, xero waa in la diiriyaa, rakibidda nalka iyo hawo-qaadashada, iyo dabaqa si loo isticmaalo qashin qoto dheer.
Miisaanka lakabka waa qiyaastii 600 g, digaag - 500 g.
Noocyada laydhka ah ee Bentemock Seabright waxay bilaabaan inay dhigaan ukumaha da'da 7-8 bilood. Sannadka waxay qaadaan 50-100 ukumo iyo in ka badan. Ukunta waxaa loo tixgeliyaa in ka badan dhadhan fiican oo ka mid ah noocyada kale iyo miisaanka 15-45 g.
Beeralayda digaaga ee ku nool dalka Ruushka
XannaaneyntaRus Zoo"Moscow - ul.Kravchenko, 20, telefoonada +7 (926) 152-41-99, +7 (965) 165-15-56, +7 (915) 898-56-72, e-mail info @ rus-zoo.ru, rus-zoo.ru.
Beeraha gaarka ah ee Marina Mikhailovna - Gobolka Moscow, Orekhovo-Zuyevo, ul. Krasin, e-mail [email protected], telefoonada +7 (929) 648-89-41, +7 (909) 681-28-08, bogga fermarina.ru.
Beeraha "Bird ah"- gobolka Yaroslavl, telefoonada +7 (916) 795-66-55, +7 (905) 529-11-55, goobta ptica-village.ru.
Qaab dhismeedka isku midka ah ee jirka iyo miisaanka (roodle - 800-900 g, digaag - 500-600 g) wuxuu leeyahay Bentamka Altai. Wax-soo-saarka ukunta ee digaaggani waa qiyaastii 50-70 ukumaha sanadkiiba, miisaanka ukumuhu waa qiyaastii 35-40 g.
Waxa kale oo aad kala sooci kartaa nooca Bantamok, sida Japanese (Digaaga Shaboobe). Iyaga, sida Seabright, ayaa yareeyaan - miisaankooda qiyaasta waa 575-725 g.
Caleemaha lacagta ah ee Wyandot ayaa soo muuqatay iyada oo laga soo dhex mariyey Sibrum oo la jaan qaaday Cochinchans.
Waxyaabaha ay ukuntooda ukumahoodu waa 120-140 ukumitiga sanadkiiba, miisaanka ugu yar ee ukumuhu waa 35 g. Shimbiraha Sibright waxay la mid yihiin midabka buluugga ah, qaabdhismeedka jidhka, laakiin miisaankiisu sarreeyo - miyirku wuxuu culeyskiisu yahay 2.5-3.5 kg, digaag - 2 -3 kg
Maanta, mid ka mid ah digaagga iibka dillaacsan waa jinsi digaag ah oo Moscow ah. Waxaa jira boqolaal ka mid ah dalka oo dhan.
Miyaad dooneysaa inaad ku biloowdo gurigaaga qolalka sii kordhaya? Markaas maqaalkani waa adiga!
Dhawaan, Bentams waxay noqdeen kuwo baahsan, sababtoo ah qiimaha ay ku kacday, maaddaama ayadoo heerarka wax soo saarka ukumaha sareeya ay kuwanu ku badan yihiin quudinta yaryar marka loo eego digaagaha waaweyn.
Sidoo kale hilibka shimbirahan waa mid aad u caan ah - aad u fiican oo dhadhan fiican leh. Iyo dareenka hooyada ee digaagga waa si cajiib ah - hen waxay isku dayeysaa in ay bilaabaan in ay ugudbiyaan ukumaha sida ugu dhakhsaha badan.